र क्सीले लियो एउटै गाउँमा १६ जनाको ज्यान..? - Khabar Nepali
होमपेज / अन्तर्राष्ट्रिय / र क्सीले लियो एउटै गाउँमा १६ जनाको ज्यान..?
र क्सीले लियो एउटै गाउँमा १६ जनाको ज्यान..?
र क्सी स्वास्थ्यका लागि त्यसै पनि राम्रो होइन । तर पनि यसको लत मानिसलाई लागेकै हुन्छ । खराब र क्सीकै कारण एउटै गाउँका १६ जनाको निधन भएको छ । भारतको बिहारको एक गाउँमा पछिल्ला केही दिनमा १६ जना मानिसको मृत्यु भएको हो । समाचार एजेन्सी पिटिआईको रिपोर्ट अनुसार अचानक त्यसरी मृत्यु हुनुको कारण खराब र क्सी हो ।
पश्चिमी चंपारण जिल्ला प्रशासनले जारी गरेको बयान अनुसार चार परिवारले मात्र निधन हुनु भन्दा पहिला म द्य पा न गरेको बताएका छन् ।
अझै दस जनाको निधनको कारण खोजीदै छ । उनीहरुको निधनको कारण पनि र क्सी नै भएको अनुमान गरिएको छ । किनकी अन्य कुनै कारण फेला परेको छैन । बिहीबार ८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । यसको भोलिपल्ट नै थप आठ जनाको मृत्यु भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
बिरामी भएका एकजनाको बयानमा एफआइआर दर्ता गरिएको छ र पाँच जना पक्राउ परेका छन् । बिहारमा नितीश कुमारको सरकारले सन् २०१६ को अप्रिलमा र क्सी प्रतिबन्ध गरेका थिए । बिहारमा यसको से व न र यसको व्यवसाय विरुद्ध कडा कानुन लागू गरिएको छ ।